News - Daabacaadda iyo baakadaha: intee in le'eg ayaad ka ogtahay kala soocidda bacaha baakadaha
Bacda wax lagu rido ayaa fududahay in la qaado waxaana loo isticmaali karaa in lagu xareeyo walxaha. Qalabka wax soo saarka ee kala duwan, sida warqad gacmeed, kartoon cad, dhar aan tolmo lahayn, iwm. Ma taqaanaa kala soocida gaarka ah ee boorsada gacanta?
1. Bacaha baakadaha xayeysiinta ah
Boorsooyinka baakadaha xayeysiinta ah waxaa loogu talagalay iyada oo loo marayo dusha baakadaha si kor loogu qaado loona horumariyo wax soo saarkooda. Baakadaha noocan ah waxay leeyihiin midabbo hodan ah, qoraalka iyo qaababkuna waa kuwo indhaha soo jiidanaya oo qaab-u-eeg ah marka loo eego boorsooyinka caadiga ah, sidaas awgeedna waxay soo jiidanaysaa dareenka macaamiisha iyo dhiirrigelinta iibka Wax soo saarka.
Bandhigyada, waxaad badanaa ku arki kartaa baakadaha noocan ah. Magaca shirkadda, astaanta shirkadda, waxyaabaha ugu muhiimsan ama falsafadda ganacsi ee shirkadda ayaa lagu daabacay baakadaha, taas oo si aan muuqan u dhiirrigelinaysa sawirka shirkadda iyo muuqaalka alaabta, taas oo u dhiganta A dacaayad moobiil ah, oo leh qulqulo kala duwan, ma buuxin karto oo keliya shuruudaha Rarista, laakiin sidoo kale waxay leedahay saameyn xayeysiin wanaagsan, markaa waa nooc caan ah oo xayaysiis loogu talagalay soosaarayaasha iyo howlaha dhaqaalaha iyo ganacsiga. Nooca u gaarka ah ee naqshadda noocyadan bacda wax lagu duubo, ayaa si aad u fiican loo sameeyaa, ayaa ka sii wanaagsan saamaynta xayeysiinta.
2. Bacaha wax lagu gado
Bacda baakadka noocan ah ayaa aad u badan, waxaa loogu talagalay dukaamada waaweyn, suuqyada laga dukaameysto iyo meelaha kale, si loogu raaxeeyo macaamiisha si ay u qaadaan alaabada macaamiisha. Bacda baakadka noocan ah ayaa inta badan ka samaysan waxyaabo caag ah. Marka loo barbardhigo boorsooyinka kale, qaab dhismeedkeeda iyo qalabkiisuba waa mid adag oo xajin kara waxyaabo badan, kharashkuna wuu hooseeyaa. Qaar ka mid ah shandadaha wax lagu iibiyo ayaa sidoo kale daabici doona macluumaadka badeecada ama shirkadda, oo waliba door ka ciyaari kara dhiirrigelinta iyo xayeysiinta.
3. Bacaha baakadaha hadiyadaha
Bacaha baakadaha hadiyaduhu waa kuwo si heer sare ah loo qorsheeyay, sida doorka sanaadiiqda dharka, oo guud ahaan kordhin kara qiimaha hadiyadaha. Badanaa waxaa jira seddex nooc oo qalab ah: caag, warqad, iyo maro, baaxadda dalabkuna sidoo kale waa mid aad u ballaaran. Bacda hadiyadaha qurxoon ee quruxda badan ayaa si fiican uga bixi kara hadiyadahaaga. Hab nololeedka isbedelaya ee had iyo jeer, macaamiisha waxay leeyihiin shuruudo sare iyo sare oo loogu talagalay bacaha baakadaha hadiyadaha, iyo bacaha baakadaha hadiyadaha noocan oo kale ah ayaa aad iyo aad caan u ah
Boorsooyinka wax lagu rido ayaa loo kala saaraa sida ay wax u yihiin
In warshadaha daabacaadda, qalabka bacaha baakadaha yihiin guud ahaan warqad dahaarka leh, warqad cad, warqad kraft, iyo kartoon cad. Dhexdooda, waraaqda dahaarka leh ayaa ah mid caan ah sababta oo ah caddadkeeda sare iyo dhalaalka, daabacaadda wanaagsan, iyo saamaynta wanaagsan ee xayeysiinta ka dib daabacaadda. Caadi ahaan, ka dib markaad ku daboosho dusha sare ee warqadda dusha sare leh filim iftiin ah ama filim jilicsan, ma aha oo kaliya inay leedahay shaqooyinka u adkeysiga qoyaanka iyo adkeysiga, laakiin sidoo kale waxay umuuqataa mid sifiican loo safeeyey.